Dzosera Maemail Email kubva kuDrives & Disks
DataNumen Outlook Drive Recovery chishandiso chine simba chekudzoreredza maemail emaExpress uye zvimwe zvinhu kubva pakutyaira & disks zvakananga. Chero bedzi iwe pawakachengeta mafaira eAptlook PST pane madhiraivha emunharaunda kana ma diski munguva yakapfuura, saka chero chikonzero chausingakwanise kuwana iyo data reOptlook, unogona kugara uchishandisa chishandiso ichi kuti uwane dhata rako iwe.
Cherechedza: Kana iyo Outlook PST faira ichiripo pane yako diski kana dhiraivha, ndokumbirawo ushandise DataNumen Outlook Repair kudzorera maemail uye zvimwe zvinhu kubva kuPST faira.
4.90 / 5 (kubva 1,627 mavhoti)
Sei DataNumen Outlook Drive Recovery?
Kukadzi 27, 2021
Mhinduro Yekutevera Zvakajairika Mhosva:
Delete iyo Outlook .pst mafaera uye wozodurura iyo Recycle Bin nekukanganisa.
Bvisa zvachose mafaira eOptlook .pst nekukanganisa.
Fomata dhiraivha ine iyo Outlook .pst mafaira nekukanganisa.
Delete iyo partition ine iyo Outlook .pst mafaira nekukanganisa.
Dzorerazve diski nekukanganisa uye lost dhiraivha ine iyo .pst mafaera.
Haugone kuverenga dhiraivha kana diski ine iyo .pst mafaera nekuda kwekutadza kwe Hardware.
Iyo dhiraivha kana diski ine iyo pst mafaera haigone kuve started kana kuzivikanwa nekuda kwehuwori muMBR, tafura yekuparadzanisa kana zvimwe zvikonzero.
Kune ese ari pamusoro makesi, uye chero zvimwe zviitiko kana iwe usingakwanise kuwana iyo Outlook data yakachengetwa mune ako emunharaunda madhiraivha kana diski, iwe unogona kugara uchitendeukira ku DataNumen Outlook Drive Recovery.
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Outlook Drive Recovery v8.5
Kutsigira kudzoreredza tsamba mameseji, maforodha, posts, kugadzwa, kukumbira musangano, kutaurirana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali uye manotsi. Zvese zvivakwa, senge chidzidzo, kuenda, kubva, cc, bcc, zuva, nezvimwe, zvinowaniswa.
Tsigiro yekudzosera zvakadzamidzirwa zvinhu, senge Excel Mashizha ekushandira, zvinyorwa zveIzwi, nezvimwe.
Tsigiro yekudzosera zvakadzimwa zvinhu zveOptlook, zvinosanganisira mameseji etsamba, maforodha, posts, kugadzwa, kukumbira musangano, kutaurirana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali uye manotsi.
Tsigiro yekudzoreredza data reOptlook kubva kumadhiraivha kana dhisiki rakakura se16777216 TB (kureva 17179869184 GB).
Tsigiro yekudzoreredza data reOptlook nekuchengetedza kwepassword, ese anodzvinyirirwa ekunyorwa uye akanyanya kunyorera (kana akanakisa kunyorera) anotsigirwa. Iyo Outlook data inogona kudzoserwa kunyangwe iwe usina password.
Tsigiro yekugadzira yakamisikidzwa PST faira mune Outlook 97-2002 fomati uye Outlook 2003-2016 fomati.
Tsigiro yekudzoreredza data reOptlook kubva kune chero mhando dzemadhiraivha kana dhisiki, senge dzakaomarara dhisiki, madhiraivha madhiraivha, floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekudzosera data reOptlook kubva kune ese marudzi emafaira masystem, akadai seFAT, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Linux Ext3, nezvimwe.
Tsigiro yekudzoreredza data reOptlook kubva kune yakashata midhiya.
Tsigiro yekudzosera batch yemadhiraivha uye disks.
kushandisa DataNumen Outlook Drive Recovery Kudzoreredza Outlook Dhata
Chero bedzi iwe pawakachengeta dhata yeAptlook pane yako dhiraivha kana dhisiki, saka chero chikonzero iwe chausingakwanise kutora kana kuwana yako Outlook data, unogona kugara uchishandisa DataNumen Outlook Drive Recovery kudzoreredza Outlook maemail uye zvimwe zvinhu kubva kune anotyaira kana dhisiki iwe.
CHERECHEDZA: PASI PAKAITIKA DATA RENYAYA RAKAITIKA PAKO RINOTAURA DATA RAKANAKA MUNZVIMBO YEDZIDZO KANA KUTI DISKI, FUNGA KUSANYORA KANA KUSHANDURA DZIDZO DZESE PANOTYAIRA KANA KUTI UDZIDZISE ZVIMWE ZVIMWE. DODR ANOGONGA KUVERENGA Dhata Kubva IYO DHIVHURE KANA KUTI IDHIKI uye ASINGAZONYORA KANA KUCHINJA DZIDZO RENYAYA PAIYO!
Cherechedza: Asati apora, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe mashandisiro.
Kana iyo inonzwisisika dhiraivha uko yako Outlook pst mafaera ekutanga akachengetwa achiripo uye saizi kana nzvimbo haina kuchinjwa izvozvi, ndokumbira usarudze iyo dhizaini kuti iongororwe:
Zvikasadaro, kana iyo inonzwisisika dhiraini isipo zvekare, nekuda kwekukamurazve diski, lost yeiyo MBR kana yekuparadzanisa ruzivo, kana chero zvimwe zvikonzero, kana iyo inonzwisisika dhiraivhi yakadzoserwa kana kuiswazve nemidziyo yekuparadzanisa yakadai sePartition Mashiripiti, saka iwe unofanirwa kuseta iro rese dhisiki dhisiki kuchengetedza iyo pst mafaera senge diski diski kuti iongororwe:
Kana iwe ukavhara-kana kubuda dhisiki rinobviswa pakombuta yako mushure DataNumen Outlook Drive Recovery yakavhurwa, ipapo unogona kudzvanya iyo bhatani rekumutsiridza iro rekutyaira uye diski runyorwa mubhokisi re combo.
Kana iwe uchiziva iyo vhezheni yeshoko reOptlook dhata kuti idzoserwe, ipapo unogona kuzvitsanangura mubhokisi re combo padivi pe diski kana drive combo bhokisi. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Determined", saka DataNumen Outlook Drive Recovery ichaongorora iyo sosi yeOptlook dhata kuti ione fomati yayo otomatiki. Nekudaro, izvi zvinotora imwe nguva.
Ndokumbira utaure zvakabuda zita refaira. Panguva yekudzoreredza, DataNumen Outlook Drive Recovery ichagadzirisa rese data reAptlook kubva ku diski kana dhiraivha iwe yawasarudza, uye chengeta iyo yakadzoserwa data mufaira idzva rine zita iri.
Iwe unogona kuisa izvo zvakabuda zvakagadziriswa zita refaira zvakananga kana tinya iyo bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira.
ONA: KUDZIVIRIRA KUNYORA YAKO YOKUTAURA DATA PAMUSORO WEDZIDZO KANA KUTI DISKI, FUNGA KUTI USARUDE CHINOGONESESWA CHINODZIDZWA ZITA REMUFANANIDZO PAMUSORO WEDZIDZO KANA KUTI IDHIKI.
Iwe unogona zvakare kudoma fomati yeinoburitsa faira mubhokisi re combo . Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Kutsunga", saka DataNumen Outlook Drive Recovery ichaburitsa mafaira akasarudzika zvinoenderana neshanduro yeAptlook yakaiswa pakombuta yako.
Baya bhatani, uye DataNumen Outlook Drive Recovery kuda start kuverenga iyo yakasarudzwa dhiraivha kana diski, uye kudzoreredza maemail uye zvimwe zvinhu kubva mairi. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana paine chero data rakadzoserwa kubva kudrive kana diski zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji seiyi:
Iye zvino unogona kuvhura yakatarwa PST faira neMicrosoft Outlook. Iyo folda yese hierarchy ichavakwazve mune yakasarudzika PST faira uye zvinhu zvadzorerwa zvoiswa kune avo ekutanga maforodha. Kune iyo lost & zvakawanikwa zvinhu, zvinozoiswa mumafolda akaita seRecovered_Group1, Yakawanikwazve_Group2, nezvimwe.
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.8 inoburitswa muna Zvita 24, 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.6 inoburitswa munaNovember 7th, 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery 2.0 inoburitswa muna Kukadzi 5, 2014
Tsigira Outlook 2013.
DataNumen Outlook Drive Recovery 1.5 inoburitswa muna Zvita 15, 2010
Natsiridza kukanganisa kwekuonekwa, kugadzirisa uye kurondedzera mashandiro.
Yepamberi Outlook Dhata Yekudzoserwa 1.0 inoburitswa muna Gumiguru 21, 2009
Tsigira Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003 uye 2007.
Tsigira Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista uye Windows 7.
Tsigiro yekugadzira yakamisikidzwa PST faira mune Outlook 97-2002 fomati uye Outlook 2003/2007 fomati.